ဘဝမှတ်တိုင်: July 2015
Android OS ဖုန်းမာမိုရီကနေ SD ကဒ်သို့ One Click နဲ့ ပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ ဆော့ဝဲ- Link2SD 4.0.12 APK for Android
Android ဖုန်းထဲမှ မာမိုရီ OR SD ကဒ်ထဲသို့ ပြောင်းရန်အခက်ခဲ့ဖြစ်နေသူများအတွက်ဆောင်ထားသင့်တဲ့Link2SD Plus v4.0.12 Updatedတာကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ဒီဆော့ဝဲလေးကတော့ဖုန်းမာမိုရီကဒ်ထဲကဆော့ဝဲများ၊ဖိုင်များ၊သီချင်းများ၊ ဗွီဒီယိုများကို Move to SD cardဆိုရင်ခေါင်စားနေရတဲ့ ပြသနာအားလုံးရှင်းသွားမှာပါ။ဘာမှ မထည့်ရသေးဘူးမာမိုရီက ပြည့်နေပြီ ဘာမှ လုပ်မရဘူး စ်ိတ်ညစ်ထာဆိုမာမိုရီထဲကဖိုင်အားလုံးကို SD ကဒ်သို့ ဘယ်လို့ရွှေ့ရထာလဲတတ်လားသိရင်ကူညီပေးပါဦး...ဒီဆော့ဝဲလေးကို ဆောင်ထားတော့။ အသုံးပြုနည်းမသိပါ ဒီ နေရာ ဖိုင်းဆိုဒ်ကတော့ Size 4.7 MB ရှိပါတယ်၊ Android OS 2.1 အထက်ဖုန်းအားလုံးမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/25/2015 08:43:00 pm0comments
♪ Lenovo A880 ကို MIUI v5 ROM တင်ခြင်း + မြန်မာစာ ထည့်သွင်းခြင်း (Without PC) ♫
ဒီ Lenovo A880 ဆိုတဲ့ Model ကတော့ ဆိုင်မှာ အများဆုံးလာပြတဲ့ Model တမျိုးပါ..
(AP) ပါ ... (Ori မဟုတ်ပါဘူး)
ဖုန်းက Screen အရွယ်အစား ကြီးကြီး နဲ့ ဈေးနှုန်းကလည်း အသင့်အတင့်မို့ ထင်ပါတယ်... မြန်မာလူမျိုးတော်တော်များများ ဝယ်ကိုင်နေကြတာ တွေ့ရပါတယ်..
မြန်မာလူမျိုးကိုင်တာဆိုတော့ မြန်မာစာလေး ရှိမှ အဆင်ပြေမှာ ဖြစ်လို့
Myanmar Font ထည့်ဖို့ ဆိုင်ကို ရောက်ရောက်လာကြပါတယ်..
Lenovo A880 Android 4.4.2 မူရင်း Firmware (ROM) မှာ မြန်မာစာကို ဘယ်လိုမှ အဆင်မပြေဖြစ်နေတာနဲ့ ...
တခြား ROM ကို တင်ကြည့်မယ်လို့ အတွေးဝင်လာတာနဲ့ www.needrom.com မှာ A880 အတွက် MIUI v5 ROM ဒေါင်းယူပြီး စမ်းသပ်လိုက်ပါတယ်..
ကံအားလျှော်စွာပဲ အဆင်ပြေသွားခဲ့ပါတယ်.. :)
ဖုန်းကို Root ဖေါက်ထားရပါမယ်..
အောက်မှာ လိုအပ်တာတွေ ဒေါင်းယူပါ..
MiUi v5 ROM For Lenovo A880
Lenovo A880 Recovery.img
ROM.zip ဖိုင်လ်ကို Memory Card ထဲသို့ ကူးထည့်ထားပါ..
Recovery.img ဖိုင်လ်ကိုလည်း Memory Card ထဲသို့ ကူးထည့်ထားပါ..
Rashr FFlash Tool ကို ဖုန်းမှာ Install လုပ်ပြီး ဖွင့်လိုက်ပါ...
SD Card ထဲမှ Recovery.img ဖိုင်လ်ကိုရွေးပေးပြီး
Recovery Mode ကို ဝင်လိုက်ပါ..
FACTORY RESET / WIPE CACHE PARTITION နဲ့ Reset ချပေးပါ..
ပြီးရင် Install Zip မှ MiUi v5 ROM ကို ရွေးပေးပြီး Flash ပေးလိုက်ပါ..
ပြီးပြီဆိုရင် အောက်ပါအတိုင်း MiUi v5 ROM လေးနဲ့ ဖုန်းပြန်တတ်လာပါလိမ့်မယ်...
မြန်မာစာအတွက်ကတော့ ကိုရဲလင်းအောင် (MPX Team) မှရေးသားဖန်တီးပေးထားတဲ့ G730 MM Font Installer နဲ့ ထည့်ပေးလိုက်ပါ...
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/25/2015 08:35:00 pm0comments
♪ Honor 3C Hol-U10 များအတွက် မြန်မာစာမှန်စေမဲ့ Bat Tool ♫
Honor 3C Hol-U10 တို့မှာ မြန်မာစာ အဆင်မပြေသူများအတွက် မြန်မာစာ မှန်စေမဲ့ Font Tool လေးကို Ko Saing Maung မှ New Year လက်ဆောင်အဖြစ်ရေးပေးလိုက်ပါတယ်...
လိုအပ်သူတွေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။ ဒီ Tool လေးကိုအသုံးပြုဖို့ ဖုန်းမှာ Root ရှိဖို့ လိုပါမယ် ဖုန်းကို Pc နဲ့ချိတ်ဆက်ပြီး ကီးဘုတ်မှ 1 ကိုနိပ်၍ Enter ခေါက်ပေးပါ ဖုန်း reboot ကျပြီး ပြန်တက်လာရင်တော့ မြန်မာစာ အဆင်ပြေပါပြီ။
Credit = Saing Maung
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/25/2015 08:31:00 pm0comments
♪ Huawei Mobile ဖုန်းမျိုးစုံ ပြုပြင်နည်း (မြန်မာလို Ebook) ♫
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/25/2015 08:12:00 pm0comments
ဒီ Tools လေးက Huawei_G730-U00 မက Android ဖုန်း အမျိုး အစားမရွေး တော်တော်များများတွေကို မြန်မာစာတွေ အဆင်ပြေနေ တာတွေ့လို့ ပြန်လည် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ရေးသားသူကတော့ Kyaw Min Khant ဖြစ်ပါတယ်။
Android Version : 2.3 .ကနေ 4.4.2. အထိ မြန်မာစာတွေကို လုံးဝ အဆင်ပြေစေပါတယ်။
ဒီ Tools အသုံးပြုဖို့အတွက် ဖုန်းမှာ Root ရှိနေဖို့ လိုအပ်ပါတယ် ။
ဖုန်း USb နဲ့ ကွန်ပျူတာနဲ့ ချိတ်ထားပါ ။ ဖုန်း Driver သိနေဖို့ လို့အပ်ပါတယ်။
ပြီးရင် Tools ကို ဖွင့်ပြီး Install ဆိုတာ နှိပ်ပြီး Oridinal Restore ဆိုတာ နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ဖုန်း Restart ကျသွားပြီး boot ပြန်တက်လာရင်တော့ မြန်မာစာ မှန်နေတာကို တွေရမှာပါ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/25/2015 08:01:00 pm0comments
ဒါလေးကတော့ keyboard လေးပါ..
အကို ထူးဇော်ဖြိုး လက်စွမ်းပြထားတာလေးပါ..
symbol တွေအများကြီးပါတဲ့ keyboard လေးပါ.
facebook မှာ ရုပ်ပြောင်လေးတွေ ထည့်ရေး
credit >> Htoo Zaw Phyo
Download : (5.2) MB
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/24/2015 03:31:00 am0comments
Huawei Ascend P6 ကို PIN Lock ကျနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Pattern Screen Lock ကျနေလို့ပဲဖြစ်ဖြစ် Factory Reset ချချင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် အောက်ပါအတိုင်း အလွယ်တကူ Reset ချနိုင်ပါတယ်။
(Factory Reset ချမှာဖြစ်တဲ့အတွက် အထဲက DATA! တွေ အားလုံး ပျက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်)
1. Switch of the phone.
2. Press and hold: Volume Up, Volume Down and Power buttons
(Vol Up + Vol Down + Power ကို တပြိုင်ထဲ တွဲနှိပ်ပါ)
3. When you see the Ascend logo release only the Power button.
(Ascend ဆိုတဲ့ LOGO လေးတတ်လာရင် Power ခလုတ်ကို လွှတ်လိုက်ပါ)
4. This is Android System Recovery menu. Use Volume Up/Down buttons for navigation and the Power button for OK and select one after the other:
• Yes -- erase all data
(Recovery Mode ကို ရောက်ရင် Vol UP နှင့် Vol Down ကီးတွေကို အသုံးပြုပြီး Select မှတ်ကာ Reset ချနိုင်ပါပြီ)
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/24/2015 03:26:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/24/2015 03:23:00 am0comments
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/24/2015 03:21:00 am0comments
ndroid ဖုန်းမှ အသုံးဝင် Application တွေကို Backup & Restore လုပ်နည်း
ဒီ Application လေးကတော့ မိမိတို့အတွက် အသုံးဝင် Application တွေကို
မပျောက်ပျက်အောင် Backup လုပ်ယူပြီး သိမ်းဆည်းထားနိုင်ပါတယ်...
Android ဖုန်း ကိုင်ဆောင်သူတိုင်း ဆောင်ထားသင့်ပါတယ်..
အောက်မှာ ပေးထားတဲ့ Download Link မှတဆင့် Application ကို ဒေါင်းယူပါ...
App Backup & Restore App ကို Install လုပ်ပါ..
App Backup & Restore App ကို ဖွင့်လိုက်ပါ...
မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ App တွေက်ို Select မှတ်ပြီး Backup လုပ်ပါ..
100% Done ဆိုရင် Backup လုပ်တာ ပြီးဆုံးသွားပါပြီ...
ပို သေချာသွားအောင် My File ကို ဖွင့်ပြီး App_Backup_Restore ဆိုတဲ့ Folder ကို Copy or Move လုပ်ပြီး SD Card ထဲမှာ သိမ်းဆည်းထားလိုက်ပါ...
System Update လုပ်လိုက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ် ၊ Firmware ပြန်တင်လိုက်ရလို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ် ၊ ဖုန်းလေးနေလို့ Factory Reset ချလိုက်လို့ပဲ ဖြစ်ဖြစ်
အကြောင်းတစုံတရာကြောင့် ဖုန်းက မူလအတိုင်း ဖြစ်သွားခဲ့ရင် Application တွေကို အချိန်ကုန်ခံပြီး ပြန်လည်ဒေါင်းယူစရာမလိုတော့ပဲ My File > SD Card မှ App_Backup_Restore Folder ကို ဖွင့်ပြီး အလွယ်တကူ Install ပေးလိုက်တာနဲ့ အချိန်ကုန် သက်သာပြီး အဆင်ပြေသွားစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်..။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/24/2015 03:17:00 am0comments
ဖုန်းနဲ့တင်​ 3D စာလုံး​ရေးချင်​သူများအတွက်​ ez Text apk
ဖုန်းနဲ့တင်​ 3D စာလုံးလှလှ​ရေးချင်​သူများအတွက်​
ez Text ဆိုတဲ့ Apk ​လေးတင်​​ပေး
သူကအရမ်းမိုက်​တယ်​ဗျ ၊ 3D စာလုံးမှာ ကျတဲ့ Shadow ကိုကိုယ့်​စိတ်​ကြိုက်​
ez Text apk v2.10 : (7.57) Mb
Download From PCloud Link
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/24/2015 03:15:00 am0comments
ဖုန်းတစ်လုံးမှာ အရေးကြီးတဲ့ Function နှစ်ခုကို Lock လုပ်နိုင်မယ့် apk လေးနှစ်ခု ရှယ်ပါမယ် ...
Call Confirm PRO နဲ့ Internet Lock ဆိုတဲ့ apk လေးနှစ်ခုပါ ...
ဖုန်းကို Security > Gesture (or) Pattern (or) Pin (or) Password နဲ့ Screen Lock ချပီး
File size : (261 KB)
မိမိတို့ရဲ့ဖုန်းကို အလုပ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ် အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ထားရင် အခြားတစ်ယောက်ယောက်က ဖုန်းယူဆက်မှာ
စိုးရိမ်နေတဲ့သူများအတွက် call ကို lock လုပ်နိုင်တဲ့ apk လေးပါ ... market တွေမှာ app lock တွေအများ ကြီးရှိပါတယ် ... ဒီကောင်လေးက Call တစ်ခုထဲအတွက်သီးသန့်ပါ ... Pro ဗားရှင်းလေးမို့ စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်မှာပါ ...
ဆော့ဝဲလ်ကို အင်စတောလုပ် ပီရင် password ထည့်ပီ save လုပ်ပေးလိုက်ရင်
မိမိရဲ့ contact ထဲကပဲဖြစ်ဖြစ် unknown no ပဲဖြစ်ဖြစ် မည်သည့်ဖုန်းနံပါတ်ကိုမဆို call လုပ်ရန် password တောင်းနေပါပီဗျ ...
password မှားတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်လည်းမရှိပါဘူး ...
မိမိပေးထားတဲ့ password ထည့်ပေးမှ ဖုန်းခေါ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ...
File size : (99 KB)
ဒီကောင်လေးက မိမိဖုန်းမှာ ကိုယ်ကလွဲပီး အခြားသူတစ်ဦးဦးက Mobile Data ကို On လို့မရအောင် Lock ချပေးမဲ့ Internet Lock လေးပါ ... ဆော့ဝဲလ်ကို အင်စတောလုပ် ပီရင် ပုံထဲကအတိုင်း password နှစ်ခါဖြည့်ပေးပီး မိမိပိတ်ချင်တဲ့ (Wifi or Data)ဟာကိုရွေးပေးကာ Ok လုပ်လိုက်ရင်ရပါပီခင်ဗျာ ...
Mobile Data ကို On လိုက်တာနဲ့ Password တောင်းတဲ့ Box လေးတက်လာပါလိမ့်မယ်ဗျ ...
မိမိဖြည့်ထားတဲ့ Password ထည့်ပေးမှ အင်တာနက်တက်လာမှာဖြစ်ပါတယ် ...
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/24/2015 03:14:00 am0comments
Display Font style မရှိတဲ့ Andriod ဖုန်းတွေမှာ( မြန်မာဖောက် )စတိုင် အမျိုးမျိုးကို အလွယ်ဆုံး ထည့်သွင်းနည်း
သူငယ်ချင်းတွေ ခဏခဏ မေးလာဖူးလို့ ဒီပို့လေးကို အခုတင်ဖြစ်ခဲ့တာပါ .။ သိပြီးသား သူတွေရှိသလို့ မသိသေးကြသေးတဲ့ သူငယ်ချင်ေးတွအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
Display Font style ပါတဲ့ ဖုန်းတွေကတော့ လွယ်ပါတယ်။ Font ကို Install လုပ်ရုံနဲ့ လန်းလို့ရပါတယ်။
ဒီပို့လေးကတော့ Display Font style မပါတဲ့ Andriod ဖုန်းတွေ အတွက် ( မြန်မာဖောက် )စတိုင် အမျိုးမျိုးကို အလွယ်ဆုံး အသုံးပြုချင်သူများ အတွက်ပေါ့ ။ ဒါပေမယ့်  မိမိ ဖုန်းမှာ Root ရှိထားဖို့တော့ လိုအပ်တယ်ဗျာ.။
ပထမဦးဆုံး . Font Installer ဒီကောင်လေးကို ဒေါင်းပြီး မိမိဖုန်းမှာ Install ပြုလုပ်ထားပေးပါ။Font Installer ကို အောက်မှာ ဒေါင်းပါ။နှစ်သက်ရာ လင့်ကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
http://pc.cd/wWcitalK Font Installer
မြန်မာဖောက်တွေကိုလည်း အရင်ဆုံး ဒေါင်းပြီ။ဒေါင်းလို့ ရလာတဲ့ Zip ဖိုင်ကိုလည်း ဖြေလိုက်ပါ။ပြီးရင် မိမိ ဖုန်းမှာ ရှာရလွယ်အောင် Folder တစ်ခုမှာ သိမ်းထားပေးပါ ။ အောက်ပါ လင့်နှစ်ခုမှာ တင်ပေးထားပါတယ်။ မြန်မာဖောက် အလန်းများ( ၅ရ )တောင်နော် ။ ကြိုက်သလောက် လန်းနိုင်ပါပြီ ။ အမုန်းလန်းနိုင်ပြီပေါ့။ ဒေါင်းရန် မြန်မာဖောက်အလန်းများ( ၅ရ )ခု ကို အောက်မှာ ဒေါင်းပါ။နှစ်သက်ရာ လင့်ကနေ ဒေါင်းယူနိုင်ပါတယ်။
ပြီးရင်တော့ Font Installer ကို ဖွင့်ပြီး Local ကို ရွေ့လိုက်ပါ ။ ဒါဆိုတော့ ခုနားက ဒေါင်းထားတဲ့ မြန်မာဖောက်အလန်းများ( ၅ရ )ခုကို Local သွားပြီ ရှာပေးပါ။ တွေပြီးဆိုရင် ( ၅ရ ) မှာ လန်းချင်တဲ့ ဖောက်တစ်ခုကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
ပြီးရင်တော့ အောက်က ဘောက်လေး တက်လာရင်တော့ အလယ်က Install ဆိုတာကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Backup ဘောက်လေး တက်လာရင်တော့ Continue ဆိုတာလေးကို ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Root Permission Request ဘောက်လေးတက်လာရင်လည်း Autborize ကိုပဲ ပြန်နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။
Reboot တောင်းလာရင်တော့ Yes ကို နှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ ဒါဆိုတော့ မိမိဖုန်းလေး ပါဝါပိတ်ပြီး ပြန်တက်လာရင်တော့ ခုနားက ရွေးထားပြီး Install ပြုလုပ်ထားတဲ့ မြန်မာဖောက်ကို မိမိ ဖုန်းပေါ်မှာ မြင်တွေ့ရပါပြီ။ အဆင်ပြေကြပါစေဗျာ။
ဆရာကြီးတော့ မဟုတ်ရပါ ။ ပြန်လည်မျှဝေစေချင်တဲ့ ဆန္ဒနဲ့ပါ ။ နည်းပညာ လမ်းကြောင့်ပေါ်က သူငယ်ချင်းတွေကို လေးစားလျှက် လင်း (စွယ်စုံ) ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/24/2015 03:07:00 am0comments
SMS ကို မြန်မာစာနဲ့စာလုံးအရေများများပို့ချင်သူများအတွက်...
SMS ကို မြန်မာစာနဲ့ စာလုံးအရေအတွက် များများ ပို့လိုသူများ အတွက်
SMS ကို မြန်မာစာနဲ့ စာလုံးအရေအတွက် များများ ပို့လိုသူများ အတွက် Cloud Myanmar ရဲ့ App တစ်ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်
SMS မှာ English စာနဲ့ဆိုရင် စာလုံး ၁၆၀ ပို့လို့ရပါတယ် ဒါပေမဲ့ မြန်မာလို ဆိုရင်တော့ စာလုံး ၇၀ သာပို့လို့ရပါတယ်
ဒီ App လေးက မြန်မာကိုလဲ English စာလို စာလုံး ၁၆၀ ထိ ပို့လို့ရအောင် လုပ်ပေးထားပါတယ်။
မြန်မာစာတွေကို English စာတွေ အဖြစ်ပြောင်းလဲ ပေးပို့တာ ဖြစ်တဲ့အတွက်
**ပို့တဲ့ဘက်ရော လက်ခံတဲ့ ဘက်မှာပါ ဒီ App လေးရှိဖို့တော့ လိုပါတယ်**
GSM,WCDMA တွေမှာ အောင်အောင်မြင်မြင် စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးပါပြီ
CDMA တွေကတော့ ရှေ့ကနှစ်ခုနဲ့ အနည်းငယ် ကွဲပြားတာကြောင့် bug နည်းနည်းရှိနေပါသေးတယ်။ လိုအပ်တွေ သူတွေ အသုံးပြုနိုင်အောင်လို့ အခု version မှာ bug ကိုမရှင်းသေးဘဲ ထုတ်ပေးလိုက်တာပါ။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/04/2015 08:01:00 pm0comments
ဒီ apk လေးကတော့ စက်ရုပ်ကိုင်ဆောင်သူတိုင်း ရှိထားသင့်ပါတယ်ဗျ......
ကျွန်တော်တို့ အင်တာနက်သုံးတဲ့အခါမှာ gsm နက်ဝက်ခ်နဲ့ သုံးရင် noti bar မှာE ပေါ်ပီ အရန်နှေးပီတော့သုံးရတာအဆင်မပြေပါဘူး..........
3G နက်ဝက်ခ်နဲ့ သုံးရင်တော့ noti bar မှာ H ပေါ်ပီ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကွန်နက်ရှင်ဟာ သိသိသာသာမြန်လာပါတယ်..........
အခု ဒီ apk လေးကတော့ gsm, wcdma အလွယ်တကူပြောင်းသုံးနိုင်ပါတယ်........
တစ်ချို့ဖုန်းတွေမှာ network ချိန်းတဲ့ function မပါသောဖုန်းများအတွက်လဲ အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်........သိပီသောသူများခွင့်လွှတ်ပါဗျ..........
သုံးရတာလဲရိုးရှင်းပါတယ်....apk ကိုဖွင့် GSM only လို့ပြောင်းထားရင် noti bar မှာ E ပေါ်နေပါလိမ့်မယ်.....
WCDMA only လို့ပြောင်းလိုက်ပါ.......noti bar မှာ H ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်ဗျ......ကျန်တာတွေဘာမှပြောင်းစရာမလိုပါဘူးဗျ......
ဒါဆိုရင် mpt ကွန်လိုင်းကို 3G နက်ဝက်ခ်နဲ့ အသုံးပြုနိုင်ပါပီဗျ..........
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 7/04/2015 07:59:00 pm0comments